Midowga Musharaxiinta oo ka jawaabay go'aanka DF | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Musharaxiinta oo ka jawaabay go’aanka DF
Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa si kulul uga jawaabay, hadalka kasoo yeeray Xukuumadda waqtigeedu sii dhamaanay, kaas oo ahaa in inay bilaabayso hirgalinta hannaanka doorashada dalka 2021-ka.
MUQDISHO - Afhayeenka Midowga Musharixiinta Ridwaan Xirsi Maxmaed ayaa ku tilmaamay go’aanka xukuumaddu qaadatay inuu yahay mid la filayay isla markaana ay doowladdu dooneyso in ay ku boobto doorashada, sidoo kale Ridwaan Xirsi wuxuu sheegay in go’aanki maanta uu hareer marsan yahay hesheesyadi hore loo gaaray.
Afhayeenka Midowga Musharixiinta waxa uu Madaxweynaha Galmudug Qoor-Qoor ku eedeeeyay, inuu ka been sheegay waanwaantii uu waday ee la xiriirtay arrimaha doorashada.
“MW Qoorqoor isaga ayaan jawaab ka sugeynay taas oo ah inuu jawaab kasoo celiyo MW Farmaajo oo ah waxa laga yeelayo arimaha jubbaland iyo kuwo kale, Qoor-Qoor wax jawaab ah oo uu nagu soo celiyayna ma jirto, saddex cisho ayuu qabsaday waana dhamaadeen” ayuu yiri Ridwaan Xirsi.
Maran weyn ayaa hareeyay doorashada Soomaaliya tan iyo marki la magacaabay Guddiga lagu muransanyahay.
Midowga Musharaxiinta ayaa go’aanka Ra;isul Wasaaraha ku tilmaamay mid ka turjumayo in Madaxweyne Farmaajo uusan doonayn inuu Soomaaliya uu ka qabto doorasho la isla oggol yahay.